यसकारण तेस्रो लहरमा बढि जाेखिम बालबालिका, कसरी जाेगाउने यस्ता छन् डाक्टरका सुझाव – Health Post Nepal
२०७८ साउन १५ गते १३:२८
हालसम्म भएका अध्ययनहरुले कोभिड–१९ को खोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने जोखिम निकै कम हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोजपछि नेपालमा तेस्रो लहरको आउने अनुमान गरेको छ।
तेस्रो लहरको चपेटामा बालबालिका पर्ने भन्दै त्यसका लागि अस्पताललाई बेड छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ।
अहिलेको नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको भेरियन्ट धेरै संक्रामक छ।
सबै उमेर समूहमा यसले प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
‘घरपरिवारमा एकजना संक्रमित भएपछि सबैजना संक्रमित भइरहेको देखिएको छ। यसले अहिलेको भाइरस धेरै व्यक्तिमा फैलिएको र भोलिका दिनमा समुदायमा फैलिँदै गएर बालबालिकाहरु पनि संक्रमित हुने देखिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने।
पहिलो लहरमा बालबालिकामा संक्रमणको फैलावट तुलनात्मक रुपमा दोस्रो लहरमा अलि बढी देखियो। तेस्रो लहरमा बढ्ने सम्भावना रहने विज्ञको अनुमान छ।
अमेरिकामा फाइजरको खोप १२ देखि १५ वर्ष उमेरसम्मका लागि सुरु भयो तर त्यो तत्काल यहाँ आउने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले बालबालिका लागि फाइजरको ६० लाख डोज बुक गरेको छ। तर, सो खोप चैत्र सम्म आइपुग्ने जानकारी आएको छ।
‘हाम्रो बानी परिवर्तन गर्ने कुरा, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुरा, मास्कको सही प्रयोग, दुरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने विषयमा यो कुरा पालना बालबालिकाबाट राम्रोसँग नहुन सक्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपालमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले खोप लगाउन मिल्दैन। त्यसकारण पनि बढी जोखिममा बालबालिका छन्।’
उनका अनुसार व्यवहार परिवर्तनका कुरा र खोपको कारणले पनि बालबालिकाभन्दा युवा वर्ग बढी सुरक्षित रहनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले बालबालिकामा बढी संक्रमण बढी हुनसक्छ।
‘बालबालिका बाहेकका उमेर समूह सुरक्षित छ भन्ने होइन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाहरुमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन अझै बाँकी छ। केही समय अझै लाग्छ,’ उनले भने।
बालबालिका धेरै संक्रमित हुँदा बढी तयारी गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार परिवर्तनसँगै अस्पतालहरुमा तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘बालबालिकालाई संक्रमण नसार्न गर्नुपर्ने व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ। यो अवस्था अरु देशहरुमा पनि छ। त्यसैले नेपालमा पनि यस्तो तयारी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
बालबालिकाहरु नै संक्रमित भएमा के गर्ने ?
खासगरी १ वर्षमुनिका र १० देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरु कडा लक्षण सहितको कोभिड १९ संक्रमण हुने उच्च जोखिम समूहमा पर्दछन् । शिशुहरु संक्रमित भएमा गम्भीर विरामी पनि पर्न सक्दछन् । त्यस्तै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा २ देखि ६ हस्तासम्मको लक्षणवीहिन वा लक्षणयुक्त कोभिड संक्रमणपछि मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम देखिन सक्छ ।
संक्रमित बालबालिकाहरुमा यस्ता कडा लक्षण देखिएमा सचेत हुनु पर्दछः
–इण्डियन एक्सप्रेसकाे सहयाेगमा ।